Famandrihana fiara amin'ny vidiny tsara indrindra?
raha matory mitady fiara manofa, amin'ny alàlan'ity motera fikarohana manaraka ity dia azonao atao ny mahita izay ilainao.
Ny fandaminana dia dia mety ho asa tena tsotra na, ny mifanohitra amin'izay, ny iraka mihoatra ny tsy azo atao. Safidio tsara ny toerana haleha, ny sidina, ny hotely ..., zavatra maro tokony ho raisina ary mila misafidy tsara ianao mba tsy hikorontana. Amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy ampiana zavatra tena lehibe: Inona no hatao raha tsy maintsy mandeha lavitra isika na mitsidika tanàna samihafa mandritra ny diantsika?
Ny safidy lehibe indrindra amin'ireo tranga ireo, ary ny mora indrindra rehetra dia ny fampiasana fitateram-bahoaka. Na izany aza, io safidy io dia mety hiteraka fahasahiranana bebe kokoa amintsika noho ireo izay vao jerena voalohany, satria iharan'ny andiana fandaharam-potoana raikitra isika ary ny vidiny farany amin'ny dia dia mety ho avo noho io toe-javatra io. Mifanohitra amin'izany no izy fa tsy mora foana ny mitondra ny fiaranao. Dia inona no ataontsika?
Tsotra dia tsotra ny valin'ity fanontaniana ity: fiara manofa. Ity karazana fiara ity dia takian'ireo mpampiasa izay maniry hanana dia lavitra tsy misy hatahorana. Marina fa ny fanofana fiara ankehitriny dia tsy hevitra manintona loatra ho an'ny olona maro, izay mbola tsy mahalala ny tombony be dia be ao aminy.
Manaraka izany, hanampy anao izahay, hamaha ny fisalasalanao maro ary hitarika anao raha ny amin'ny fanofana fiara. Raha te hanana fiara manofa ianao amin'ny vidiny mirary dia mila tsindrio fotsiny eto.
Tombony amin'ny fampiasana fiara fanofana
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny fampiasana fitateram-bahoaka dia mampiseho fatiantoka maro raha oharina amin'ireo tombony lehibe atolotry ny zava-misy tsotra momba ny fanofana fiara ho antsika.
Ny voalohany amin'izy ireo dia Libertad. Ny mandroso raha mbola tianao dia zavatra mahafinaritra. Tsy ao intsony ny ahiahin'ilay tovolahy: amin'ny firy ny fiaingan'ny fiara fitateram-bahoaka? Aiza no tsy maintsy handehananao ny metro? Etc., izay mety ho tena fampijaliana.
Faharoa, ny Ampionòny. Tsy mitovy ny mifindra amin'ny bus na metro feno olona izay itahirizana ny valizinao dia mety ho dia iray manontolo, satria matetika isika dia tsy manana ny toerana irina. Na izany aza, raha manofa fiara isika, dia esorina ireo toe-javatra rehetra ireo.
Ny lakile iray hafa dia, tsy isalasalana, ny fahavaratra. Ny fanofana fiara dia mety mitentina 5-15 € isan'andro, zavatra ambany lavitra noho ny vidin'ny fiara fitateram-bahoaka, taxi sns sns, hifindra amin'ny toerana iray.
Ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny fanofana fiara ihany no voatonona. Azo antoka fa, rehefa manapa-kevitra ny hanao izany ianao dia ho hitanao fa misy maro hafa.
Afaka manofa fiara an-tserasera ve ianao?
Amin'izao tontolo izao misy izao tontolo izao izay nanapahan'ny internet ny sakana rehetra mety hitranga, tokony holazaina mazava tsara fa mazava ho azy fa afaka manofa fiara an-tserasera.
Raha mandany fotoana vitsivitsy amin'ny fotoanantsika sarobidy amin'ny fizahana amin'ny solosainantsika na ny Smartphone isika dia ho hitantsika fa ny tambajotra dia feno orinasa natokana ho an'ity sehatra ity ary azontsika atao ny mampiasa ny serivisin'izy ireo amin'ny fomba tena tsotra sy tanteraka. an-tserasera
Afaka mahita ilay fanta-daza koa isika searchers, izay manamora ny asantsika amin'ny fomba tsy mampino. Ireo motera fikarohana ireo dia mandady eo anelanelan'ny tolotra samihafa mba hampisehoana amintsika ireo izay manintona sy mahaliana antsika indrindra.
Isan'ireo orinasa malaza indrindra aseho antsika Budget y View. Ny teti-bola dia orinasa Kaliforniaana natsangana tamin'ny faran'ny taona 50, izay manana mihoatra ny Birao 3000 any amin'ny firenena 128 manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny lafiny iray, Avis dia fantatra amin'ny alalàntsika eo am-pelatanan'ny fiara isan-karazany amin'ny karazana sy fepetra rehetra hanomezana fahafaham-po ny mpampiasa rehetra.
Ary, raha ny momba ny motera fikarohana an-tserasera, tsy afaka miala izahay raha tsy manonona hanao kayak, fampiharana finday mitarika izay mankafy ny fangorahan'ny ankamaroan'ny vahoaka amin'ny fahombiazany sy ny fahatsorany. Aza misalasala mampiasa azy.
Ahoana ny fomba fiasan'ny motera fikarohana amin'ny finday amin'ny Internet?
Un motera fikarohana an-tserasera dia iray amin'ireo fitaovana mora indrindra mampiasa. Ary koa, saika ireo rafitra rehetra ireo dia miasa mitovy.
Araka ny hitanao amin'ny motera fikarohana finday ataonay, dia mampiseho anay kely misy banga na boaty banga samihafa izay afaka hamenoinay ny vaovao angatahina amintsika.
Raha ny mahazatra dia angatahina isika ny toerana tiana hakana ny fiara. Rehefa avy, ny daty fanangonana sy fandefasana ny mitovy. Ary, farany, hamita ny endri-javatra fiara tenany: karazana, maodely sns.
Mazava ho azy, miankina amin'ny motera fikarohana atrehantsika, tsy maintsy manolotra fampahalalana iray na iray hafa isika, fa amin'ny fitsipika ankapobeny dia matetika no antsipiriany izay takiana matetika amintsika.
Ilaina ve ny carte de crédit hanofa fiara?
Ny fanofana fiara tsy misy carte de crédit dia mety tsy ho vita mihitsy, satria ireo orinasa manao an'io asa io dia matetika tsy dia sariaka loatra amin'ny fandoavam-bola.
Ny antony mahatonga izany dia tena tsotra. Ny fiara dia lafo, sarotra tazonina, ka ilaina ny miantoka fa tsara izany rehefa avy nampiasaina. Mba hanaovana izany dia mamorona karazana fiantohana izay ampiana amin'ny vidiny voalohany amin'ny fanofana fiara.
Ny fiantohana voalaza dia ho aloan'ny mpampiasa raha toa ka niteraka olana teo amin'ny fiara io. Mandritra izany fotoana izany dia miambina hatrany amin'ilay antsoina hoe petra-bola, izay tsy inona fa ny fanakanana voalohany ny habetsaky ny vola misy amin'ny karatra, izay havoaka amin'ny fandefasana ny fiara amin'ny toe-javatra tonga lafatra.
Io no antony lehibe mahatonga ny carte de crédit saika ampiasaina matetika rehefa manofa fiara. Saingy hoy izahay matetika, satria miova izany, ary azo atao ny manofa fiara amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola amin'ny orinasa sasany toa ny, ohatra, AutoEurope.
Fanofana fiara eo anelanelan'ny tsirairay
Amin'izao fotoana izao dia misy orinasa vaovao mipoitra izay mampiasa fomba fiasa hafa. Tsy izy ireo intsony no nametraka ny fiarany manokana fa azontsika atao, fa amin'ny alàlan'ny olo-tsy miankina.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny olona samihafa dia manofa ny fiarany amin'ny alàlan'ny orinasa, miaraka amin'ny tanjona tokana hahazoana tombony. Amin'ny alàlan'ny dokam-barotra dia mametraka ny vidiny sy ny fananana izy ireo, ary mifandray amin'izy ireo ireo liana. Mihaona ny mpanofa sy ny mpanjifa amin'ny fandefasana sy ny fanangonana ny fiara, izay tsy maintsy hitazona ny toetrany tonga lafatra sy miaraka amin'ny fitoeran-tsolika feno.
Amin'ity fomba tsotra ity, ilay fantatra amin'ny hoe 'fanofana fiara eo anelanelan'ny tsirairay'.
Farany, raha mila manofa fiara mandritra ny fotoana lava ianao, angamba ny safidy fanofana Mercedes na marika premium hafa dia ho tsara kokoa aminao satria manolotra vidiny mifaninana izy ireo ary rehefa afaka kelikely dia afaka misafidy ianao manavao azy na mamerina azy tsy misy adidy.